Luka Modric Oo Loo Weecin Rabo Paris Iyo Warakii Ugu Danbeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartiyda Kubada Cagta Aduunka
Macalin Carlo Ancelotti ayaa ka dhawaajiyay in kooxdiisa Paris St German u tafa xeydaneyso sidii ay ku heli lahayd Luka Modric oo maalmahan aad loola xiriirinayay Real Madrid, laakiin sida muuqata kooxdan Paris oo lasoo baxday muruq dhaqaale ayaan u tureyn koox walba magac iyo koobka ay doonto ha haysatee, waxaana ilaa iyo hada lala yaabanyahay sidii ay dhulka ugu jiideen Ac Milan, marka wax kale ka filo kooxda lagu quudinayo lacagaha carbeed.
waxaa lasoo sheegaya in la gaaray heshiis u dhexeeya Manchester City iyo Tottenham oo ku saabsan Adebayor inuu si joogta ah ugu sii nagaado kooxdan danbe oo uu sanadkii hore amaahda ugu joogay isagoo u dhaliyay 17 gool.
Liverpool ayaa ku dhaw inay dhameystirto beeca ama lasoo wareegida xidiga da'da yar ee kooxda Roma iyo Italia Fabio Borini, waxa uuna noqon doona ciyaariyahankii ugu horeeyay oo ay kooxdu soo iibsato tan iyo markii la shaqaaleysiiyay tababare Brendan Rodgers.
Weeraryahanka kooxda hoos u dhacday ee Villareal Rossi ayaa lagu soo waramayaa inuu ku dhawyahay heshiis dheer uu la galo kooxda Milan oo aad u raadineysa ninkii u badali lahaa Zlatan Ibrahimovich oo ay iska iibisay.
James Rodriguez ayaa dhinac isaga leexiyay warkii sheegayay inuu ku biirayo Manchester United, isagoo warbaahinta u sheegay inuu aad ugu faraxsanyahay nolosha kooxdiisa Porto.
Kooxda Turkiga ah ee Bursaspor ayaa aad ugu dhaw in ay heshiis buuxa la gaarto difaaca Manchester City Kolo Toure oo aad u dhibsaday kursiga keydka ah ee kooxdaas, waxaana la hubaa inuu ku qanci doono ka ciyaarida Turkiga maadaama uu yahay nin Muslim ah.
Carlos vela oo geeska iyo weerarka uga ciyaari jiray Arsenal ayaa si toos ugu wareegaya kooxda reer Spain ee Real Sociedad oo uu sanadkii hore amaah ahaan ugu ciyaaray isagoo u dhaliyay 12 gool 35tii kulan ee uu ciyaaray.
Macalinka Cusub ee Tottenham Andre Villas Boas ayaa isha la raacaya weeraryahanka kooxda Atletico Madrid Adrian oo lagu sheego inuu yahay xidig usoo baxaya xulka Spain oo farsamo iyo gool dhalis badan. hadii ay helaan Tottenham waxaa albaabka loo furayaa Jermain Defoe.
Intaan kaliya kuma eka sheekooyinka iyo wararka gaagaaban ee suuqa balse maalin walba waan idiin soo gudbin doonaa iyaga oo dul mar buuxa ah, hadi uu alla noo saamaxo.
Oslo / Norway Macalin Carlo Ancelotti ayaa ka dhawaajiyay in kooxdiisa Paris St German u tafa xeydaneyso sidii ay ku heli lahayd Luka Modric oo maalmahan aad loola xiriirinayay Real Madrid, laakiin sida muuqata kooxdan Paris oo lasoo baxday muruq dhaqaale ayaan u tureyn koox walba magac iyo koobka ay doonto ha haysatee, waxaana ilaa iyo hada lala yaabanyahay sidii ay dhulka ugu jiideen Ac Milan, marka wax kale ka filo kooxda lagu quudinayo lacagaha carbeed.
Manchester United ayaa aad ugu dhaw soo iibsiga xidiga da'da yar ee reer Brazil Lucas Moura oo lagu sheego inuu kamid yahay kuwa ugu sareeya xidgaha mustaqbalka kubada cagta aduunka, isaga oo dhaxda iyo weerarkaba ka ciyaara, waxaana lagu qiimeeyay 25 ilaa 30 Milyan oo lacagta Ingiriiska ah oo ku dhaw qiyaastii 40 Milyan oo dollar.
Weeraryahanka kooxda hoos u dhacday ee Villareal Rossi ayaa lagu soo waramayaa inuu ku dhawyahay heshiis dheer uu la galo kooxda Milan oo aad u raadineysa ninkii u badali lahaa Zlatan Ibrahimovich oo ay iska iibisay.James Rodriguez ayaa dhinac isaga leexiyay warkii sheegayay inuu ku biirayo Manchester United, isagoo warbaahinta u sheegay inuu aad ugu faraxsanyahay nolosha kooxdiisa Porto.
Oslo / Norway Latest News